ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရလို့ အိမ်ကမိသားစုကို အရမ်းလွမ်းကြောင်းရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ…. – Cele Oscar
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရလို့ အိမ်ကမိသားစုကို အရမ်းလွမ်းကြောင်းရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ….
June 17, 2021 By L YC Celebrity
ပရိတျသတျ ကွီးရေ…သရုပျဆောငျ မငျးသား ညီနန်ဒ ကတော့ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲကွီး မှာ ပွညျသူတှေ နဲ့ အ တူ လမျးပျေါ ထှကျ လှုပျရှားမှု့ တှကေို ရဲရဲ ရငျ့ရငျ့ နဲ့ အငျတိုကျ အားတိုကျ ပွုလုပျ တာကွောငျ့ ( ၅၀၅ ) က ဖွငျ့ အမှု ဖှငျ့ အရေးယူခွငျးခံ ထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ထဲက တဈယောကျ ပါပဲ..။ညီနန်ဒ ကတော့ အကွမျးဖကျ စဈကောငျစီ ရဲ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူ ခွငျးခံထားရ တာကွောငျ့ လတျတလော မှာ အခကျအခဲ တှနေဲ့ အန်တရာယျတှေ ကွားက ရှောငျတိမျး ပုနျး ခိုနရေသူလညျး ဖွဈပါတယျ..။
လတျတလော အခွအေနတှေေ မှာ အိမျမ ပွနျနိုငျတာ အတျောလေး ကွာနပွေီ ဖွဈတဲ့ အတှကျ ခဈြရတဲ့ မိသားစုကို လှမျးနေ ရပွီး အိမျပွနျခငျြတဲ့ စိတျဇော တှကွေောငျ့ အိပျမကျ မကျခဲ့တဲ့ အကွောငျးတှေ ပွောပွ လာပါတယျ..။​မိသားစု ကို နနေ့ေ့ ညည သတိရ လှမျး ဆှတျနရေပွီး အခု ခြိနျမှာ လကျတှအေ့ကောငျ အထညျ မဖျောနိုငျ သေးတဲ့ အိမျပွနျခွငျး ကို အိပျမကျ ထဲမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ အကွောငျးတှေ ကို လှမျးလှမျး ဆှေးဆှေး လေး ပွောပွ ထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
“အလှမျး… ပွနျခငျြ စိတျကွောငျ့…အလှမျး… ပွနျခငျြ ဇောကွောငျ့…နခေ့ငျး… အိပျမကျထဲ မှာ အတှေး… အိပျမကျထဲမှာ အိမျပွနျ ဖွဈတယျ..” ဆိုပွီး သူ့ ရဲ့အဖွဈတှကေို ညီနန်ဒ က ပွော ပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။တျောလှနျရေး အတှကျ လူထု လှုပျရှားမှု့တှေ ပွုလုပျကာ အရေးတျောပုံ ကွီးမှာ တတျနိုငျ သလောကျ ကွိုးစားပါဝငျ အားဖွညျ့ခဲ့ပွီး မိသားစုတှေ နဲ့ ခှဲခှာနေ နရေတဲ့ ညီနန်ဒ ကို ပွညျသူ့ ပရိသတျတှကေ လညျး အားပေးစကားတှေ ပွောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျ သတျကွီးကို အထူး ကြေးဇူးတငျရှိ ပါတယျနျော..။
Source: Nyi Nanda’s Fb Acc
Crd : MM Load
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ…သရုပ်ဆောင် မင်းသား ညီနန္ဒ ကတော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီး မှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အ တူ လမ်းပေါ် ထွက် လှုပ်ရှားမှု့ တွေကို ရဲရဲ ရင့်ရင့် နဲ့ အင်တိုက် အားတိုက် ပြုလုပ် တာကြောင့် ( ၅၀၅ ) က ဖြင့် အမှု ဖွင့် အရေးယူခြင်းခံ ထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ထဲက တစ်ယောက် ပါပဲ..။ညီနန္ဒ ကတော့ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ရဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူ ခြင်းခံထားရ တာကြောင့် လတ်တလော မှာ အခက်အခဲ တွေနဲ့ အန္တရာယ်တွေ ကြားက ရှောင်တိမ်း ပုန်း ခိုနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
လတ်တလော အခြေအနေတွေ မှာ အိမ်မ ပြန်နိုင်တာ အတော်လေး ကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ချစ်ရတဲ့ မိသားစုကို လွမ်းနေ ရပြီး အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ဇော တွေကြောင့် အိပ်မက် မက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြ လာပါတယ်..။​မိသားစု ကို နေ့နေ့ ညည သတိရ လွမ်း ဆွတ်နေရပြီး အခု ချိန်မှာ လက်တွေ့အကောင် အထည် မဖော်နိုင် သေးတဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်း ကို အိပ်မက် ထဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ ကို လွမ်းလွမ်း ဆွေးဆွေး လေး ပြောပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
“အလွမ်း… ပြန်ချင် စိတ်ကြောင့်…အလွမ်း… ပြန်ချင် ဇောကြောင့်…နေ့ခင်း… အိပ်မက်ထဲ မှာ အတွေး… အိပ်မက်ထဲမှာ အိမ်ပြန် ဖြစ်တယ်..” ဆိုပြီး သူ့ ရဲ့အဖြစ်တွေကို ညီနန္ဒ က ပြော ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။တော်လှန်ရေး အတွက် လူထု လှုပ်ရှားမှု့တွေ ပြုလုပ်ကာ အရေးတော်ပုံ ကြီးမှာ တတ်နိုင် သလောက် ကြိုးစားပါဝင် အားဖြည့်ခဲ့ပြီး မိသားစုတွေ နဲ့ ခွဲခွာနေ နေရတဲ့ ညီနန္ဒ ကို ပြည်သူ့ ပရိသတ်တွေက လည်း အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ် သတ်ကြီးကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါတယ်နော်..။
အေးချမ်းလှတဲ့ ဘုရားရိပ် တရားရိပ်မှာ တစ်မိသားစုလုံး ကောင်းမှု့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ရင်း ပြည်သူတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ မေကဗျာ….
CDM သမားများအတွက် သူမရဲ့ မရှိမဖြစ်ထားရမယ့် ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကိုပါ မကြည့်ဘဲ အကုန်လှူလိုက်တဲ့ ဟန်နာယူရီ